Maxay Xawaaraha Boggu U Yahay Mid Xasaasi ah? Sida Loo Tijaabiyo Oo Loo Hormariyo | Martech Zone
Goobaha badankood waxay lumiyaan qiyaastii kalabar booqdayaashooda sababtoo ah xawaaraha bogga oo gaabis ah. Xaqiiqdii, celceliska bogga desktop-ka heerka soo-kabashada waa 42%, celceliska soo kabashada bogga mobilka ee wareega waa 58%, iyo celceliska celceliska bogga soo degitaanka bogga kabashada wuxuu u dhexeeyaa 60 ilaa 90%. Lambarjarin nambarada si kasta ha noqotee, gaar ahaan tixgelinta isticmaalka mobilada ayaa sii kordheysa wayna sii adkaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa soo jiidashada iyo ilaalinta dareenka macaamiisha.
Sida laga soo xigtay Google, celceliska waqtiga xamuulka bogga ee loogu talagalay bogagga soo degitaanka sarewali waa a gaabis ah 12.8 ilbiriqsi. Tan waxaa ka mid ah meelaha ay internet-ka moobiilku ku badan yahay iyo 4G xawaaraha qaar ka mid ah kuwa adduunka ugu sarreeya.
Celceliska xawaaraha bogga ayaa ah mid aad u dheer, iyada oo la tixgelinayo 53% dadka isticmaala waxay ka tagayaan bogagga 3 ilbiriqsi oo keliya ka dib - oo waxay kaliya ka sii xumaaneysaa halkaas:
Waa maxay xawaaraha xamuulka boggu fiican yahay, haddaba? Ku dhow-deg deg ah.
Nasiib wanaagse, xal ayaa jira. Kahor inta aynaan halkaa u gaadhin taasi, aynu wax badan ka ogaanno muhiimadda xawaaraha bogga.
Maxay Sababta Xawaareynta Page
eMarketer wuxuu muujinayaa in 2019 Kharashka xayeysiiska dhijitaalka ah ee adduunka ayaa dhaafi doona $ 316 billion oo kaliya waxay u muuqataa inay kordhayso mustaqbalka dhow:
Sida iska cad, noocyada ayaa qarash badan ku bixinaya xayeysiinta waxayna filayaan inay wax badan ka helaan miisaaniyadooda. Laakiin, markay dadku gujiyaan xayaysiis - iyo bogga soo degista kadib-guji ku guuldareysto inuu isla markiiba soo raro - waxay u badan tahay inay dib u riixaan dhowr ilbiriqsi gudahood, sidaas darteedna, miisaaniyadda xayeysiistayaasha ayaa luntay.
Saamaynta qiimaha xawaaraha bogga waa mid aad u weyn waana inaad gebi ahaanba ka dhigtaa xawaaraha bogga mudnaanta hore u socodka. Waa kuwan dhowr cabbir iyo dhibco aad tixgelinayso markaad qiimeynayso ololayaashaada xayeysiinta dhijitaalka ah:
Kaliya maahan culeyska bogga gaabiska ah ee dadka isticmaala, laakiin sidoo kale waxay u keentaa Dhibcaha Tayada inay dhibaato soo gaarto. Maaddaama Dhibcaha Tayada ay si toos ah ula xiriirto kanaga darajada ad, iyo ugu dambeyntii wixii aad ku bixin laheyd guji kasta, bogga tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayaa u yareeya dhibcaha.
Haddii dad yari ku dhegan yihiin sugitaanka boggaaga in la raro, dad yar ayaa helaya fursad ay ku beddelaan. Waxay ka tagayaan boggaaga xitaa kahor intaanay arkin dalabkaaga, dheefahaaga, wicitaan-waxqabad, iwm.
Tafaariiqda, tusaale ahaan, xitaa a dib u dhac hal sekan ah waqtiyada gawaarida moobiilka waxay saameyn ku yeelan karaan sicirka beddelka illaa 20%.
Kalabar illaa 2016, isticmaalka shabakadda moobiilka mariyey taraafikada desktop mugga:
Iyadoo macaamiisha ay kharash gareeyaan waqti badan oo mobilka ah, suuqleyda iyo xayeysiiyeyaashu (iyo wali waa) lagu qasbay inay la qabsadaan. Hal dariiqo oo wax loo geeyo ololayaasha moobiilka ku habboon waa in la abuuro bogag dhaqso u raran.
Kaas oo noo keenaya xalka xawaaraha bogga # 1 ee ka hadlaya mid kasta oo ka mid ah arrimahan.
Bogagga Soo Degitaanka AMP Waxay Kordhiyaan Xawaaraha Bogga
AMP, ah qaab-furan oo lagu soo bandhigay 2016, waxay siisaa dariiqa xayeysiistayaasha si ay u abuuraan hillaac-deg deg ah, deg deg deg deg deg deg ah boggag internet ah oo mudnaanta siinaya khibradda isticmaalaha wixii ka sarreeya.
Maaddaama uu yahay hoggaamiyaha hagaajinta kadib-guji, Instapage wuxuu bixiyaa awood u leh inuu abuuro bogagga soo degitaanka kadib guji adoo adeegsanaya qaab dhismeedka AMP:
Iyada oo la Dhisme AMP dhise, suuqleyda iyo xayeysiiyayaashu waxay:
Abuur boggaga degitaanka AMP-guji kadib-guji si toos ah bogga 'Instapage platform', adigoon lahayn horumariye
Xaqiiji, imtixaanka A / B, oo ku daabac boggaga AMP bogagga WordPress ama domain gaar ah
Keen khibradaha mobilka ee wanaagsan, kordhi Dhibcaha Tayada, oo wad wadal badal badan
Shirkadda gargaarka kacaanka ee Eargo waxay aragtay natiijooyin cajaa'ib leh tan iyo markii ay hirgalisay AMP khibradeeda guji kadib:
AMP Pages Pages with Instapage - Baabuur deg deg ah oo AMP ah
Marka lagu daro dhisida bogagga AMP ee Instapage, waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo aad ku hormarin karto xawaaraha bogga. Waa kuwan seddex ka mid ah si aad u bilowdo.
3 Siyaabo kale oo lagu hagaajiyo Xawaaraha Bogga
1. Kaabashada qalabka xawaaraha bogga
Faafaahinta PageSpeed waa tijaabada xawaaraha Google ee ka dhigeysa boggaaga 0 illaa 100 dhibcood:
Dhibcaha waxay ku saleysan yihiin laba xuduudaha:
Waqtiga kor-u-laab laabta (wadarta waqtiga loogu talagalay bog si loogu soo bandhigo waxyaabaha ka sarreeya labanlaab ka dib markii adeegsade uu codsado bog cusub)
Waqtiga bogga buuxa lagu buuxiyo (waqtiga ay ku qaadato biraawsar inuu si buuxda u bixiyo bog ka dib markii adeegsade uu codsado)
Markasta oo ay dhibcahaagu sarreeyaan, ayaa aad u fiicnaanaya boggaaga. Sida caadiga ah suulka, wax kasta oo ka sarreeya 85 waxay muujinayaan in boggaagu uu si fiican u shaqeynayo. Ka hooseeya 85 waana inaad fiirisaa talooyinka ay soo bandhigtay Google si kor loogu qaado dhibcahaaga.
Fahamka BoggaSpeed ​​wuxuu siiyaa warbixinno labada desktop iyo noocyada moobiilka ee boggaaga, waxayna sidoo kale bixisaa talooyin ku saabsan hagaajinta.
Ka fikir Google: Tijaabi Boggeyga, oo ay bilaabeen kooxda 'PageSpeed ​​Insights team', ayaa kaliya tijaabiya xawaaraha bogga moobiilka, marka loo eego moobaylka iyo desktop-ka labadaba. Waa tilmaame kale oo ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan (ama gaabis ah) boggagaagu u buuxsamaan:
Qalabkani wuxuu soo bandhigayaa waqtigaaga rarka, wuxuu bixiyaa talooyin qaas ah oo lagu dedejinayo bog kasta oo ka mid ah boggaaga, ka dibna wuxuu bixiyaa ikhtiyaarka ah inuu soo saaro warbixin buuxda.
2. Sawirro Dhamaystiran oo Fiican (Cadaadis)
Ku dhajinta sawirrada isku soo ururin, dib u habeyn, dib u habeyn, iwm ayaa kaa caawin kara badbaadinta baaytka, xawaareynta waqtiga xamuulka bogga, iyo hagaajinta waxqabadka goobta mobilada. Ka mid ah talooyinka kale ee sare.
Intaa waxaa sii dheer, hadda way ka fududdahay sidii hore in loogu adeego sawirro la isku qurxiyey oo la xareeyay maxaa yeelay goobahan waa la otomatigayn karaa Tusaale ahaan, waxaad lahaan kartaa boqolaal sawir oo dib loo habeeyay oo si otomaatig ah loogu cadaadiyey qoraal, hoos u dhigista shaqada gacanta (marka la dhisayo bogagga AMP, astaamaha astaanta u gaarka ah waxay ka dhigaan qaar badan oo ka mid ah isku-hagaajinta otomaatig ah).
Xulashada qaabka ugu fiican ee muuqaalka way adkaan kartaa iyadoo la heli karo fursado badan. Dhammaan waxay kuxirantahay kiiska isticmaalka, laakiin halkan waxaa ku yaal kuwa ugu caansan:
WebP: Sawirro sawir leh iyo turjumaad
JPEG: Sawirro aan daah-furnaan lahayn
PNG: Sooyaal hufan
SVG: Astaamaha iyo qaababka iskeelka ah
Google waxay kugula talineysaa inaad ka bilowdo WebP maxaa yeelay waxay u ogolaaneysaa 30% riixitaan ka badan JPEG, iyada oo aan lumin tayada muuqaalka.
3. Mudnaan siinta waxyaabaha ka sarreeya-laabka
Hagaajinta aragtida isticmaalehaaga ee xawaaraha goobta ayaa ku dhow muhiimad ahaan hagaajinta xawaaraha goobta lafteeda. Taasi waa sababta marka sawiradaada la hagaajiyo, waa inaad hubisaa in lagu soo gudbiyo waqtiga saxda ah ee saxda ah.
Tixgeli tan: Qalabka mobilada, qaybta muuqata ee goobta waxay ku egtahay aag yar, dusha sare. Natiija ahaan, waxaad fursad u leedahay inaad si dhakhso leh ugu shubto waxyaabaha ku jira aaggaas, halka walxaha kale ee ka hooseeya laab laabku ay ku soo dejinayaan xagga dambe.
Xusuusin: Waxa ka caawiya sameynta AMP mid gaar ah waa iyada oo leh mudnaan leh in la dhiso rarka kheyraadka, iyadoo la hubinayo in kaliya kheyraadka ugu muhiimsan marka hore la soo dejiyo.
Waxay noqon kartaa caqabad in la yareeyo tirada sawirrada goobta - gaar ahaan noocyada tafaariiqda, tusaale ahaan, alaabooyin badan - laakiin weli waa muhiim in ugu yaraan la yareeyo saameynta sawirrada waqtiga culeyska saddexda xeeladood.
Kordhi xawaaraha boggaaga AMP
Haddii bogaggaaga moobiilku ay ka cabanayaan heerar kacsi sarreeya iyo heerar beddelaad hooseeya sababtoo ah xawaaraha xawaaraha bogga oo yaraada, bogagga AMP waxay noqon karaan nimcadaada badbaadinta.
Ku billow abuurista bog-guji bogagga 'AMP' si aad si dhakhso ah, ugu habboon, iyo waayo-aragnimada ugu habboon ee moobiilka ugu booqato martidaada, oo aad u hagaajiso Dhibcaha Tayadaada iyo beddelaadyada hawsha.
Tags: ampamp bogagga degitaankaheerka beddelkasicir-bararkafaafidda sawirkanoocyada muuqaalkaSaabuuntajpgboggaga soo degayawaayo-aragnimo wareegaxawaaraha bogga boggaxawaaraha mobiladawebka mobilefalanqeeye boggaxawaaraha boggafalanqeeyaha xawaaraha boggapngqalabka xawaaraha goobtasvgkula fikir Googlewebp
Tyson Degdeg ah
Tyson Quick waa Aasaasaha iyo Maamulaha Instapage, hogaamiyaha hagaajinta post-click. Wuxuu aasaasay Instapage 2012 ka dib markuu arkay sida waxqabadka iyo suuqgeynta kobaca ay lacag ugu luminayaan ololeyaal xayeysiis ah oo aan sifiican loo qaban. Tan iyo markaas aragtidiisu waxay ahayd inuu abuuro shay ka kooban badeecadaha soo-kabashada ka dib-gujinta oo kordhiya soo-celinta iyada oo loo marayo shakhsiyeynta xayeysiinta.